ရည်းစားမထားဖူးတာကြောင့် ပိုပိုနဲ့ ရိုက်တဲ့ Love Sense မှာရင်တွေ ခုန်နေခဲ့တဲ့ သီဟအောင်
ရေဘေးသင့် ဒေသတွေကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက် လှူဒါန်းမယ့် အဆိုတော် ကြာညိုသွယ်
အစ်မကိုယ်တိုင်ပဲသွားပြီးတော့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာ အချိုးကျသွားလှူဖို့အစီအစဉ်ရှိပါ တယ်။ လှူတဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းဘယ်လိုပုဂ်္ဂိုလ်ရယ်လို့တော့ စွဲမှတ်မထားဘူး..... Read More
ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ မုန်းမှာ ၊ အမြင်ကပ်မှာကို မကြောက်ဘူး ဆိုတဲ့ ပြေဇင်
အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် ဗီလိန်အဖြစ် ကမ်းလှမ်း ကြတာများတယ်။ ဗီလိန် များတော့ လည်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ မုန်း မှာတွေ၊ အမြင်ကပ်မှာတွေ ကျွန်တော် မကြောက်ဘူး.... Read More
ကလေးသရုပ်ဆောင်ဝင်လုပ်ရင်း ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့ မေမီကိုကို
မေမီကိုကိုရဲ့ အစ်မဖြစ်သူဇင်ဇင်ရွှန်းက လည်း သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးပါ။ ငယ်စဉ်က အစ်မ ဖြစ်သူရိုက်ကွင်းကိုလိုက် သွားခဲ့ရင်းက ကလေး သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ ဖူးပါတယ်...... Read More
ဝေဖန်သူတွေအပေါ် နန်းဆုရတီစိုး ဘယ်လိုမြင်လဲ
အဲဒီ့လူတွေအပေါ်မှာ နန်းဆုတို့ စိတ်မရှိတော့ဘူး။ ကိုယ့်အလုပ်ပဲကိုယ်လုပ်ကြ တာဆိုတော့ နှစ် ယောက်စလုံး ဥပေက်္ခာပြုလိုက်ကြတယ်။.. Read More
ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကို အသုံးချပြီးတော့ ကူညီချင်တဲ့သူထက်စာရင် တိုက်ခိုက်ချင်တဲ့သူတွေများတယ်လို့ ရွှေအိမ်စည်ဖွင့်ဟ
Ex ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိတယ်လေ။ ပြောနေကြတဲ့သူတွေကို ပြန်ပြော ချင်တာက ကိုယ့်လိုမျိုး သူတို့ လုပ်နိုင်လို့လား။ ပြောချင်တဲ့သူတွေကတော့ ပြောနေမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေက အဓိကမကျပါဘူး. . . Read More
မိဘမဲ့ကလေးများအတွက်ကစားကွင်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းမယ့် မိုးစက်ဝိုင်
မိုးစက်သတိထား မိတာက ဒီကလေးတွေက အားလပ်ချိန်မှာ ဆော့ဖို့နေရာမရှိဘူး။ သူတို့ဆော့ရင်လည်း သူတို့ဘာသာ သူတို့ ဖျော်ဖြေတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သူတို့ကိုထိန်းတဲ့ ဆရာမတွေနဲ့အတူ တူဆော့ရတယ်. . . Read More
အရင်တုန်းကဆိုရင် ဒီးဒီ က အရမ်းမပိန်ဘူး ဆိုပေမယ့် ခပ် ပြည့်ပြည့်လေးနဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်က ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အဆင်ပြေတယ်။ အခုဆိုရင် တအားဝတုတ်ကြီး ဖြစ် သွားတယ်။ သမီးကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲ သမီးလေးမျက်နှာကို မြင်ရမယ် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ. . . Read More
ဘီလီအိုင်းလစ်ရ်ှသီဆိုထားတဲ့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်ှးဇာတ်ကားသစ်ရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေး You were never on my side အွန်းလိုင်းမှတစ်ဆင့် နားဆင်နိုင်ပြီ
ဖွေးဖွေးနဲ့ရုပ်ရှင်အတူတူရိုက်ကူးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရန်ခုန်နေတဲ့ ကောင်းမြတ်စံ
ချစ်ရသူနဲ့ လက်တွဲတော့မယ် Gummi
တစ်ကိုယ်တော်အခွေထွက်ရှိဖို့ အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့ ပိုးမီ
ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာ စတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ Story တွေအဖြစ် အများကြီးရှိနေပါတယ် Road to Mandalay ဒါရိုက်တာ Midi Z နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
မြန်မာ-ထိုင်ဝမ်လူမျိုး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Midi Z ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင် အမွေအနှစ်ပွဲတော် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်ကို တက်ရောက်လာ ခဲ့ပြီးေ နာက် သူရိုက်ကူးထားပြီး နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲ တော်တွေမှာ ဆုတံဆိပ်ပေါင်းများစွာကို…
ရုပ်ရှင်သမားဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့ ပြီးပြီ ဆိုရင် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမယ် အကယ်ဒမီဒေစီကျော်ဝင်း
မင်းသမီးကြီး အကယ်ဒမီဒေစီကျော်ဝင်းဟာ သူတို့ ခေတ်အခါတုန်းကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေများ စွာရှိခဲ့ဖူးသလို ဒီကနေ့တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာခေတ်မှာ ........
ကော်ပီနဲ့မှီငြမ်းဆိုရင် ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာမျိုး ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအနေနဲ့လုပ်လို့မရနိုင်ကြောင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလူမင်းပြောကြား
ရုပ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလူမင်းက မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့် အနာ ဂတ်မှာ နိုင်ငံတာကာ WIPO အဖွဲ့ အစည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ရင် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေဆိုတာ......
အလွမ်းသီချင်း ကြိုက်တဲ့ ရေဒီယို ဒီဗီဒီထွက်အပြီး ပုဂံမှာ အလှူဒါနတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပိုပို
" အလွမ်းသီချင်းကြိုက်တဲ့ရေဒီယို" ဒီဗီဒီထွက်ရှိအပြီး ပုဂံက ရှေးဟောင်းစေတီတွေ ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ပိုပိုက ...
တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲကို Live Show အခွေအနေနဲ့ ထွက်ရှိသွားမယ့် G.Fatt
၂ဝ၁၉ နှစ်သစ်မှာ အလုပ်တွေဆက်တိုက်လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ G.Fatt က ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၈ မှာ အရာထင်ခဲ့တဲ့ဂီတမှတ်တိုင်ကို ဆက်လက်အသက်သွင်းဦး မှာပါ။ အဲဒါကတော့ . . .
တစ်ကိုယ်တော် အခွေထွက်မှာလား Music Streaming နဲ့ပဲ သွားမှာလား Oasix
သီချင်းအသစ်တွေဖန်တီးထားတာများစွာရှိနေပြီဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ် တော်အခွေအနေနဲ့ သွားမှာလား၊ Streaming အနေနဲ့သွားမှာ လားဆို တာ ဝေခွဲရခက်နေတဲ့ ဟစ်ဟော့ပ်အ ဆိုတော် Oasix က သူကြုံနေရတဲ့အ ခက်အခဲကို အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ် . . .
ဖခင်နဲ့အတူ Show ပွဲမလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့ အဆိုတော်ပန်းရောင်ခြယ်
''ခွေထဲကသီချင်းတွေကတော့ အရင်တုန်းက ပန်းရောင်ဆိုနေကျပုံစံလေး တွေလည်းပါမယ်။ အသည်းကွဲသီချင်းတွေလည်းပါမယ်။ နောက်ပြီး ပန်းရောင် ဆိုလေ့ ဆိုထသိပ်မရှိတဲ့ Electronic Music ကိုဦစားပေးထားတဲ့ သီချင်း တွေလည်းပါတယ်။ ဒီ ၂ဝ၁၉ မှာတော့...
နေတိုး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် အတွဲအဖက်ကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအဖြစ် ပုံဖော်မယ့် ဒါရိုက်တာ ဝင်းလွင်ထက်
''အခု ဒီ၂ဝ၁၉ ထဲမှာတော့ ၃ လပိုင်း ၁၄ ရက်နေ့ကျရင် ရိုက်ဖို့အတွက် Pre Production လုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ ၃ လပိုင်း ၁၄ ရက်နေ့မှာ ရိုက်မယ်။ Box No 88 ဆိုတဲ့ကားကို…
ရွှေမှုန်ရတီအတွက်သီချင်းတွေ ထပ်လုပ် ပေးဖို့ရှိတယ်ရွှေထူး
''သူ့ကို သီချင်းထပ် ပြီးလုပ်ဖို့ တိုင်ပင်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက Professional က သရုပ်ဆောင်ပိုင်းဖြစ်နေတော့ သီချင်းဆိုခဲ့တာကလည်း ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးပင်ပန်းလို့ အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန် နားထောင်ဖို့ လုပ်ပေး ဖြစ်တာပါ။ နောက်ထပ်လည်း သူ့ကို...
ဒီကြားထဲမှာနီနီ အလှကုန်က Products အသစ်ထွက်စရာလေးလည်းရှိတော့ ပရိသတ်တွေ မှတ်ရမှာများနေလို့ပါ။ ပြီးတော့ဒီနှစ် ၁ဝ လပိုင်းမှာလည်း နီနီ Show လုပ်ဖို့ ရှိပါ တယ် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရတာ မလွယ်ကူတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း...
မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ ၂ဝ၁၉ ထဲမှာ ရုံတင်ပြသဖို့များတယ်ဆိုတဲ့နေတိုး
''၂ဝ၁၉ မှာ ကျွန်တော် ထွေထွေထူး ထူး ပြောင်းလဲလိုက်တာတော့ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၂ဝ၁၈ ထဲမှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကလည်း မကောင်းဘူးဆိုတာ သိတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြင်ချင်ခဲ့တယ် ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီလိုမျိုး...
Myanmar Idol Season –4မှာ အဆိုတော် တင်ဇာမော် ဒိုင်အဖြစ် ပါဝင်ဦးမှာလား
ပရိသတ်ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် တင်ဇာမော် ကတော့ လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာ အလုပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဖြစ်နေပြီး လက်ရှိမှာလည်း ရှစ်ခွေမြောက်တေး စီးရီးထွက်ရှိဖို့ စီစဉ်နေသူပါ။ သူက တော့ Myanmar Idol သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲမှာလည်း နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ဒိုင်…